रविमाथि आरोप प्रमाणित भए दफा १८७ अन्तर्गत कार्वाही हुनसक्ने, के छ कानुनमा व्यवस्था? - Everest Dainik - News from Nepal
रविमाथि आरोप प्रमाणित भए दफा १८७ अन्तर्गत कार्वाही हुनसक्ने, के छ कानुनमा व्यवस्था?
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या नोट मानिने भिडियो सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने सबैको चासोमा रहेका छन् ।
शालिकराम आत्महत्या प्रकरणः अस्मिता कार्की पक्राउ
पुडासैनीले रवि लामिछानेको समूहले दिएको पीडा व्यक्त गर्दै रेकर्ड गरेका १३ मिनेट जम्मा समयका दुईवटा भिडियोमा न्यूज २४ टेलिभिजनमा काम गर्दा रवि लामिछानेले आफैलाई दुख दिएको र फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
भिडियोका सार हेर्दा रवि लामिछाने र उनको टीमको पीडा खेप्न नसकी पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
यद्यपी उनले भनेका आरोपकै कारण आत्महत्या गर्नैपर्ने अवस्था थियो या थिएन भन्ने बहस पनि अहिले चलेको छ । लेखक दिल निशानी मगरले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाइएकै विषयमा मर्नैपर्ने थियो र ? भन्ने आशयको प्रश्न समेत नगरेका होइनन् ।
अहिले अनुसन्धानका क्रममा रहेकोले यो आत्महत्याका कतिपय पक्षहरु अनुत्तरित छन । त्यसैले यसै होला या यो नै सत्य हो भन्ने विषयमा निक्र्यौलमा पुग्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रहरीले समेत सबै कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । तर भिडियोमा जसरी पत्रकार पुडासैनीले रबि लामिछानेलाई दोषारोपण गरेका छन् । त्यसलाई आत्महत्याको मुख्य कारण (मोटिभ) मान्ने निष्कर्शमा प्रहरी अनुसन्धान पुग्यो भने रबि लामिछानेमाथि कार्वाही हुने देखिन्छ । यदि त्यो प्रमाणित भएन भने या त्यो निश्कर्षमा प्रहरी पुगेन भने उनी कार्बाहीबाट जोगिन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस थुनछेक बहस सकियाे, साँझ ६ बजेसम्म फैसला आउने
नेपालको फौजदारी संहिता २०७४ ले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्न नहुने भन्दै यदि कसैले कसैलाई आत्महत्याका लागि उक्साएको खण्डमा या त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको खण्डमा त्यसका लागि सजाय तोकको छ ।
फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ ज्यान सम्बन्धी कसूरको दफा १८५ मा यसबारेमा स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
दफा१८७ मा लेखिएको छ-
१८७. आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने ः
(१) कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा दुरुत्साहन दिई त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गरिदिन हुंदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैंयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि रबि लामिछानेले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै मृतक शालिकराम पुडासैनीलाई ठूलो भ्रम परेको र थप जानकारी फेरी सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ प्रहरीले पुडासैनीसँग जोडिएका कतिपय अन्य पक्षको समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर भिडियोमा हेर्दा भने रबि लामिछाने आत्महत्याको परिस्थिति सिर्जन गर्ने मुख्य पात्र रहेको आम बुझाई बन्न थालेको छ ।
यो स्थितिमा रबि लामिछानेमाथि कार्वाही हुने अवस्थामा यो उनको जीवनको सबैभन्दा दुखद क्षण बन्ने संकेत देखिएको छ ।